တရုတ် INT-ZPL 00S စီးရီးတံတောင်ဆစ် Coaxial အမျိုးသမီး Receptacle M7 Size ကို Connector ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | INTE-AUTO
INT-ZPL 00S စီးရီးတံတောင်ဆစ် Coaxial အမျိုးသမီး Receptacle M7 Size ကို Connector
Printed Circuit ဘုတ်အဖွဲ့သည် 00S စီးရီး M7 Size ကို right-Angled တံတောင်ဆစ် Coaxial Socket / အမျိုးသမီး Connector, နီကယ်နှင့်အတူတစ်ဦးသောကြေးဝါ shell ကိုချထားတဲ့ရွှေနှင့်အဆက်အသွယ်ချထားတဲ့။ အသေးဆုံး mini ကိုတံတောင်ဆစ် coaxial အမျိုးသမီး receptacle ။
S ကစီးရီး တံတောင်ဆစ် coaxial connectors အောက်ပါအတိုင်းအဖြစ်အဓိက features တွေရှိတယ်
2. coaxial (50Ω), Unipole အမျိုးသမီးအဆက်အသွယ်။
3. M7 အရွယ်အစား, 00S စီးရီးသေးသေးလေး connectors ။
အသုံးပြုမှု 4. လွယ်ကူ, ယုံကြည်စိတ်ချဖျော်ဖြေပွဲ။
အပြည့်အဝ EMC ဒိုင်းကာအဘို့အပြ 5. 360 °။
7. ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးညွှန်းကိန်း (mated): အိုင်ပီ 50.
Coaxial တံတောင်ဆစ် socket product size：
မှတ်ချက်: All our part number begin with” INT-”, for example: INT- ZPL.00.250.NTN
ဒီ connector ကိုကျယ်ပြန့်စမ်းသပ်မှုနှင့်တိုင်းတာခြင်း, စက်မှုလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှု, AV စနစ်စနစ်ကိုအသုံးပြုသည် , အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေး, အသံ, ဗီဒီယိုမာလ်တီမီဒီယာနှင့်အခြားလယ်ကွက်။
INTE-AUTO ပြင်ပအသံလွှင့်အဘို့အထုတ်လွှင့်ကင်မရာများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ, အသံပစ္စည်းကိရိယာများ, ရေဒီယိုမိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်မိုက်ခရိုဝေ့ဂီယာ (OB), စတူဒီယို, ရုပ်ရှင်ရုံ, ရုပ်မြင်သံကြား, ရေဒီယို, ပြဇာတ်ရုံနှင့်ဂီတအပါအဝင် applications များအများစုအမျိုးအစားများများအတွက် connector ကိုဖြေရှင်းနည်းရှိပါတယ်။
နောက်တစ်ခု: INT-ZPL တံတောင်ဆစ် 90 ဒီဂရီအမျိုးသမီးဂဟေဆက် Connector Socket
ယခင်: INT-ZPS 00S Printed Circuit ဘုတ်အဖွဲ့သည်တံတောင်ဆစ် Coaxial Socket M7 အမျိုးသမီး Connector
INT-TFA S ကစီးရီး Coaxial Connector IP50 တစ်ဦးက Nut,f...
INT-TFA S ကစီးရီး Coaxial Unipole Push ကိုကိုယ်ပိုင် Pull ...
INT-ZPS 00S တံတောင်ဆစ် Coaxial Socket M7 အမျိုးသမီး Conn ...
INT-ZRA Coaxial အမျိုးသမီး Connector က S စီးရီး FEMALE ...
INT-TLA 00S စီးရီးတံတောင်ဆစ် Coaxial အမျိုးသား Connector ...
INT-DCA Coaxial သတ္တု Push ကိုအမျိုးသမီးအခမဲ့ Soc Pull ...